चन्द्रमान मास्के र चन्द्रशमशेर राणा- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
कलाकारको निर्भीक अनि निरपेक्ष यात्रा नेपाल, दक्षिण एसिया र युरोपतिरका कलाकारको ओडिसी वा महायात्राको साझा रूपक हो
चैत्र १४, २०७७ अभि सुवेदी
स्पेनी फ्लुको महामारीले दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा लाखौं मानिसले ज्यान गुमाइरहेको बेला थियो । त्यो अवस्था अहिलेको कोभिड महामारीभन्दा अझ उग्र र भयावह थियो । सन् १९१८ मा बम्बै–ज्वरोको नामले प्रख्यात त्यस इन्फ्लुएन्जाले विभाजनपूर्वको भारतमा झन्डै १ करोड ८० लाख मानिसको ज्यान लिएको थियो ।
त्यस वर्षको सेप्टेम्बर महिनामा इन्फ्लुएन्जा सबैभन्दा उचाइमा पुगेको थियो । महात्मा गान्धीलाई पनि त्यस महामारीले भेटेको थियो । उनको नेतृत्वमा चलिरहेको आजादीको संघर्षलाई समेत यसले निकै प्रभावित पारेको थियो । महामारी सबैतिर फैलियो । नेपालमा पनि आइपुग्यो तर यसको खासै वर्णन र सम्झना पढ्न पाएको छैन । एकाध ठाउँमा थोरै पढेको हुँ । तर, एक हिउँद महिनामा काठमाडौं बाङ्गेमुडाको एउटा सानो पुरानो, शुभ्र र शान्त घरमा गएका बेला त्यो स्पेनी फ्लुको अप्रत्यक्ष प्रसंग आयो । कलाकार चन्द्रमान मास्के (१९००–१९८४) को घरको प्रसंग हो यो ।
दुखेको दाँतले दहन गरेर सुन्निएको गालामाथि फलामको किला दौडाएर एउटा मुडोमा ठोकिदिएपछि दन्तपीडाबाट आराम हुने विश्वास छ । त्यो किला बाङ्गेमुडामा छ । त्यहाँ मेरो पनि एउटा किला ठोकिएको छ । त्यसैको ठीक अगाडिको घरको पहिलो तलामा मेरो निम्ति एक महान् कलाको स्पन्दन भएको कोठा छ । थियो भन्नुपर्छ । त्यो कलाकार चन्द्रमान मास्केको घर र मानिस भेट्ने स्निग्ध सानो थलो हो । कलाकारका पुत्र र हाम्रा साथी त्रिविका हिसाबका प्राध्यापक सन्तोष मास्के, जो अहिले पिताको महान कला यात्रामाथि काम गर्दै छन्, सायद त्यो घरमा बस्दैनन् । म कलाकार चन्द्रमान मास्केलाई भेट्न त्यस घरमा बरोबर जान्थेँ । मलाई ‘मेरा युवक मित्र’ भनेर उनले मानिसका आगाडि भन्दा अत्यन्त आनन्द र गौरवको अनुभूति हुन्थ्यो । कलाकार चन्द्रमान मास्केले मलाई र मेरा साथी ब्रिटिस नेपाली इतिहासकार जोन व्हेल्पटनलाई एउटा जाडोको बिहानीमा उनको जीवनको अथवा हाम्रो आधुनिक कलाको इतिहासको एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कथा सुनाए ।
सन् १९१८ को अत्यन्त जाडो महिनाको एक बिहानको कुरा हो । युवक चन्द्रमान मास्के घरैमा थिए । लाग्छ, तिनी कलकत्तामा मेडिकल शिक्षा पढ्थे । अहिले घर आएका थिए । काठमाडौंमा धेरैको ज्यान लिएको महामारीले चन्द्रमान मास्केका पिताजीको पनि मृत्यु भएको थियो । परिवार शोकसँग सामना गरिरहेको थियो । पिताजीको अकस्मात् यसरी मृत्यु हुँदा घरमा ठूलो चुनौती थपिएको थियो । त्यही चिसो बिहानमा शान्त सडकको सन्नाटा चिरेर एक जना मान्छे करायो, ‘ए चन्द्रमान ! माथि को छ, ए चन्द्रमान मास्के ! यहाँ चिठी बुझ्न आऊ !’ यस्तै भनेर ऊ कराइरह्यो । ऊ थप्दै गयो, ‘श्री ३ महाराजको हुकुम छ, आइहाल ! लिएर आउने हुकुम छ ! एक छिन पर्खिन्छु । तयारी गरेर झर ।’ परिवारमा सबै जना एकछिन स्तब्ध भए, मुखामुख गरे । दाजुले सोधे, ‘तैंले के गरेको थिइस् ? सम्झना छ ?’ युवक चन्द्रमान मास्केले केही सम्झिन सकेनन् । कलकत्ताको मैदानमा महात्मा गान्धीको आह्वानमा भएको एउटा आमसभा हेर्न गएको सम्झना भयो उनलाई । लाग्यो, राजाको कुनै जासुसले यो कुरा यहाँ आएर सुनायो । उनले अरू केही सम्झिन सकेनन् । विचार गरे, त्यही हुनुपर्छ ।
साना काँटीका युवक चन्द्रमान मास्के पछिपछि अनि लिन आउनेहरू अघि–अघि हुँदै भद्रकाली पुगे । त्यहाँ अगाडि जाडोयामको बाली उठाएको खेतको फाँट थियो । अगाडि आफू कहिल्यै नगएको सिंहदरबार त्यो शान्त परिवेशमा भयानक रूप लिएर उठ्यो । बिहानको फाट्दै गरेको कुइरोमा त्यस दरबारका गजुरहरू पनि खुल्दै गए । ढोकामा सन्देशवाहकले केके मिलायो, अनि उनलाई भित्र लग्यो । त्यस बेलासम्म चन्द्रमान साहसी भइसकेका थिए । उनलाई खरायो र सिंहको कथाको सम्झना भएको थियो । आखिर मरिनै हाल्छु भने किन डराएर जाने ? यस प्रश्नले उनलाई साहसी बनाएको थियो ।
चन्द्रशमशेर बिहानको घाममा आफ्ना वरिपरिका मान्छे, भाइभारदारहरूसँग हरियो चौरमा टहलिइरहेका थिए । चन्द्रमान मास्केले तिनलाई त्यसरी नजिकैबाट देखेका थिएनन् । त्यो सन्देशवाहकले उनलाई उपस्थित गरायो । मास्के आफ्नो अन्तिम र अनिश्चित भविताका निम्ति तयार र साहसी भइसकेका थिए । चन्द्रशमशेरले यसो उनलाई तलदेखि माथिसम्म हेरे अनि सोधे, ‘ए चन्द्रमान, कलकत्तामा आर्ट पढ्न जान्छस् ?’ चन्द्रमान मास्केले मलाई र जोनलाई प्रेम र हँसिलो मुद्राले हेर्दे भने, ‘हजुरको त्यो बेला मलाई आगोबाट निकालेर हिउँमा फालिदिएको जस्तो अनुभव भयो ।’ ‘जान्छु सरकार, जो निगाहा ।’ ‘ल दुई वर्षलाई पढ्न जा ।’ चन्द्रमानले प्रस्ट भने, ‘सरकार, दुई वर्षले पुग्दैन । सबै सक्दा ६ वर्ष लाग्छ ।’ चन्द्रशमशेरले भने, ‘ल, छ वर्ष नै भयो । चित्र बनाउन आउँछ ?’ ‘आउँछ सरकार ।’ अनि उनको त्यही नजिकको मान्छेलाई देखाएर चन्द्रशमशेरले भने, ‘ल, यो मान्छेको अनुहार बनाइराख्, म हिँडेर फर्किन्जेलसम्ममा ।’ ‘जो हुकुम, सरकार ! तर, मसँग कागत–पेन्सिल केही छैन, सरकार ।’ ‘ल बन्दबस्त गरिदेओ ।’ त्यो डाक्टरलाई अगाडि राखेर चन्द्रमानले उसको पेन्सिल चित्र बनाए । उनको भनाइमा त्यो मान्छे महाराजको ध्यान आकर्षित हुन पाएकोमा अत्यन्त प्रसन्न भएको थियो । उसले चन्द्रमानसँग पनि कृतज्ञताका भाव व्यक्त गरिरह्यो ।
चन्द्रमानले यो कथा भनिरहँदा केहीपटक ‘हजुरहरूले यो चन्द्रशमशेर महाराजको कुरामा चाहिँ माफ गरिबक्सनुपर्छ’ भने । मैले त्यो भनाइको अर्थ धेरैपछि उनले मलाई पछि भनेका कुराबाट बढी बुझें । उनी राणाशासनविरोधी भए पनि चन्द्रशमशेरलाई भने तिनबाट अलग राख्न चाहन्थे । मैले ‘कान्तिपुर’ को अघिल्लो लेख ‘चन्द्रमान मास्के र त्रिभुवनका जुँगा’ (४ पुस, २०७७) मा मास्केको राजनैतिक चेतना र उनको जेल जीवनवारे लेखिसकेको छु ।
त्यही सालपछि अर्का नेपाली कलाकार तेजबहादुर चित्रकार (१८९८–१९७१) पनि त्यही गभर्मेन्ट स्कुल अफ आर्टमा अध्ययन गर्न गए । त्योबेला कलकत्तामा पश्चिमी कलाको शिक्षा, पूर्वीय कला र परम्परा वा ई.बी. हावेल र अवनीन्द्रनाथ ठाकुरले चलाएको ओरियन्टालिज्मको विषयमा तीव्र बहसहरू भइरहेका थिए । नवीन्द्रमान राजभण्डारीले सम्पादन गरेको भर्खरै प्रकाशित ‘सिर्जना’ कला पत्रिका, वर्ष–७ मा यो महत्त्वपूर्ण बहसको विषयमा ‘वाइडेनिङ स्फेयर अफ मोडर्न आर्ट’ भन्ने लेख लेखेको छु । गभर्मेन्ट स्कुल अफ आर्टमा कलाको अध्ययन गर्न जाने तेस्रा नेपाली विद्यार्थी लैनसिंह वाङ्देलको ‘चन्द्रमानसिंह मास्के’ (२०४२) शीर्षक प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको किताबमा छापिएको ‘सम्झनाका टुक्राहरू’ संस्मरणबाट चन्द्रमानले त्यहाँ कस्तो प्रभाव पारेका थिए र उनको व्यक्तित्व कस्तो थियो भन्ने कुरा खुल्छन् । ‘पिक्चरेस्क नेपाल’ नामको प्रसिद्ध किताबका लेखक पर्सी ब्राउन चन्द्रमान मास्केले पढेको बेला त्यो गभर्मेन्ट स्कुलका प्रिन्सिपल रहेछन् ।
वाङ्देललाई भेट्दा ब्राउनले चन्द्रमानको विषयमा सोधेछन् । वाङ्देलले मास्केको नाउँ पहिलोपटक त्यहीं सुनेका रहेछन् । वाङ्देलले त्यसपछि चन्द्रमानको उपस्थिति र उनको चर्चा अनेकौं पटक सुनेछन् । पछि २००८ मा दार्जिलिङमा कला प्रदर्शनी गर्न नेपालबाट केशव दुवाडी र अमर चित्रकारसहित चार जना कलाकार गएछन् । बालकृष्ण समले ‘त्यहीँ छेउमा उभिइरहेका, पुड्को–पुड्को सुगठित शरीर भएको, हँसिलो व्यक्तिसँग परिचय गराउँदै, यहाँ नै चन्द्रमान मास्के हुनुहुन्छ’ भनेर चिनाएपछि वाङ्देल उनका जीवनभरका मित्र हुने क्रम सुरु भएको रहेछ । वाङ्देल अध्ययन गर्न प्यारिस गए । दस वर्षपछि नेपाल आए । अनि चन्द्रमान मास्के र उनको सम्बन्ध घनीभूत भयो– बंगाली बोल्ने, त्यहीँ कलेज र कलाकारका कुरा गर्ने, नेपालको कलाको विषयमा छलफल गर्ने । वाङ्देल भन्छन्, ‘ती दुई दाजुभाइ जस्तै भए ।’ वाङ्देललाई नेपालको मूर्तिकला अध्ययन गर्न चन्द्रमानले नै पहिला लगाएका रहेछन् । वाङ्देल अनेकौं संस्मरणमा चन्द्रमानको आत्मविश्वास, साहस र कोमलता अनि प्रगीतात्मक भावनाको सामर्थ्यबारे लेख्छन् ।
‘तपार्इंले चन्द्रमान मास्केलाई नजिकैबाट चिन्नुभएको छ । उहाँमाथि एउटा लेख लेखिदिनुपर्‍यो, मैले सम्पादन गरेको एकेडेमीको पत्रिकालाई । अंग्रेजीमा लेखिदिनू,’ मनुजबाबु मिश्रले भने । मैले यही लेखको विषय ‘द आर्टिस्ट विदाउट अ पेन्सिल एन्ड पेपर’ शीर्षकमा लेखेर बुझाएँ । मनुजबाबुले त्यो पत्रिका दुई वर्षपछि मात्रै निकाले । तर जुन दिन अर्थात् जुलाई २८, १९८४ मा त्यो पत्रिका निस्क्यो, त्यही दिन यी महान् प्रिय कलाकार दिवंगत भए । मनुजबाबुले यो सन्जोग मेरो लेखको अगाडि लेखेका छन् । त्यो लेख मेरो श्रद्धाञ्जली भयो कलाकार चन्द्रमान मास्केमाथि ।
नेपालमा आधुनिक कलाको पश्चिमी शिक्षा, स्थानीय विषयको शाश्वत साधना र प्रयोग गर्ने यी महान् कलाकारको चन्द्रशमशेर राणासँगको त्यो बिहान आमनेसामने भएको घटनाले हामी सबै कलाफ्रेमीहरलाई भन्छ– कलाकारको निर्भीक अनि निरपेक्ष यात्रा नेपाल, दक्षिण एसिया र युरोपतिरका कलाकारको ओडिसी वा महायात्राको साझा रूपक हो ।
प्रकाशित : चैत्र १४, २०७७ १०:११
भाषा प्रयोगमा केवल व्याकरणका बहसभन्दा अलग एउटा अर्को शक्तिशाली पाटो हुन्छ । त्यो हो, खास जीवनमा प्रयोग हुने भाषा।
फाल्गुन २९, २०७७ अभि सुवेदी
भाषाका अप्रिय र भ्रामक प्रयोग आज मानिसका निम्ति ठूला समस्या भएका छन् । यो समस्या वैश्विक भए पनि म यस छोटो लेखमा नेपालमा भाषाका अप्रिय, अभद्र, अवाञ्छित र अनर्गल प्रयोगले अहिले हामी नेपालका मानिस घायल भएका छौं भन्ने विषयमाथि चर्चा गर्न चाहन्छु ।
एक वर्षदेखि कोभिडको महामारीले सबैलाई भौतिक र मानिसिक रूपले थला पारेको छ । मानिसका अवस्था नाजुक भएका छन् । मनहरू थिल्थिलो भएका छन् । दस–एघार महिनादेखि भाषा एकाध दर्जन शब्द र केही भयाक्रान्त अवस्था बुझाउने वाक्यहरूमा खुम्चिएको छ । संक्रमितको संख्या, तिनको अवस्था, साधारण र सघन उपचार, खुला नाकामा अवरोध, पोकापन्तुरा बोकेर फेरि फर्किए भारततिरै, सघन र साधारण उपचार, मृत्यु हुनेको संख्या, खाली खुट्टाले पैदलै यति दिन हिँडेर, चामल सिद्धिएर मृत्यु, बलात्कार र हत्या, अनि घूसखोरी, कमिसन, ठेकेदारले बीचैमा काम छोडिदिएर अलपत्र, औषधि र अरू संयन्त्र ल्याउनेलाई कमिसन खाएर काम दिएकाजस्ता केही उदाहरण मात्र हुन् ।
यीभन्दा अझ दारुण भाषिक प्रयोग भए । मेरा एक जना विद्यार्थीले थेसिसको प्रयोजनका निम्ति भेला पारिरहेका छन् यस्ता भाषिका । यस्तो बेलामा ‘आर्तहरूका चहर्‍याइरहेका घाउ’ लाई निको पार्ने जिम्मा कसको ? स्वाभाविक रूपमा राज्यको, सरकारको हो भन्ने मानिन्छ । नेपालमा ठूलो कमिनिस्ट दलको सरकार, भएकोले उनीहरूको जिम्मेवारी सबभन्दा ठूलो हो भन्ने मैले मानेको हुँ ।
कम्तीमा पनि सरल भाषामा आफूले गरेका कामको व्याख्या गरिदिने, भएका स्रोतसाधनको पारदर्शी प्रयोग गरेर नागरिकलाई विश्वास दिलाउने, मनमा शान्ति हुने, राम्रा आशा जगाउने र काम गरिदिने भाषिकाको प्रयोग गर्ने काम हो उनीहरूको । विरोधी दलको पनि त्यही दायित्व हो । बहुमतमा छैनौं, सरकारमा छैनौं भनेर आर्तहरूको घाउमा मलम लाउने र सहयोगका कार्यक्रम गर्ने काम छोड्न विरोधी दललाई मिल्छ र ? नभए कसरी जनताको पार्टी हो भनेर विश्वास दिलाउने ? सधैं सर्वसाधारण जनताको चिन्ता गर्ने, तिनको मानमर्दन भएकोमा आक्रोश पोख्ने बीपी कोइरालाको पार्टी नेपाली कांग्रेसको आर्तहरूको घाउ निको पार्ने कामहरू गर्नु/गराउनु कर्तव्य होइन र ?
अर्को अध्याय सुरु भयो । न भूतोः न भविष्यति । धेरै नागरिकले ठूलो मतले सरकार चलाउन र देशमा थिति बसाउन भोट दिएको कमिनिस्ट पार्टी त भित्री शक्ति बाँडफाँडका झगडा गरेर सबै समय एकाध बिल्डिङमा भेला सार्दै बिताएर बस्यो, यस्ता नाजुक समयमा । पछि झगडा बाहिर छताछुल्ल भयो । कोभिड, भोकमरी र बेरोजगारी अनि घूसखोरीका कुचक्रले पीडित मानिसलाई केको मलम लगाउँथे उनीहरूले, अझ झन् झगडा बढ्दै गयो । सरकारमा भएकाहरू लौ यो संसदै चाहिँदैन, अब चुनाव ठोक्ने भनेर निस्के । कमिनिस्टको अर्को समूह अब यसलाई पल्टाउने हो भनेर निस्के । अनि भाषा प्रयोगको कुरा आयो ।
हरेक दिनजसो हरेक फराकिला र साँघुरा थलोमा नारायणहिटीदेखि, टुँडिखेल, चौर, चौबाटा र गल्छिँडा सबैतिर मञ्च ठडिए अनि भित्तामा मार्क्स, लेनिन, स्टालिन र माओका फोटा एकै ठाउँमा टाँगेर ती दुवै समूह भाषण त के भन्नु, गालीगलोजमा उत्रिए । अनि निस्के कहिल्यै नसुनिएका भाषा । म त चकितै परें, गाँठे हो ! गालीगलौजका भाषा त यी प्रसिद्ध नेताहरू कति जान्ने रहेछन्, सीमा नै छैन । तिनका भाषण सुनेर मानिसले वैचारिक विश्वास जगाउने केही कुरा पाएनन् । मनमा शान्ति हुने दुईवटा कुरा पनि त्यहाँ झरेनन् । अलिकता आशा गर्ने वाणी त्यहाँ केही थिएनन् । कोभिडको महामारी र कठोर जीवनले दिएका मनोगत अवस्था भएका, कमजोड मन भएका नागरिक मैले जाने, बुझे, सोधे र सुनेअनुसार चिन्ताग्रस्त भएका छन् । आफ्नै अनुभव पनि जोडेर भन्दै छु । उता कांग्रेसले पनि बीपी, शालीन वाणी भएका किसुनजी, ठाडै बोल्ने तर प्रेमले सत्य कुरा भनिदिने गणेशमानजीका फोटा टाँगेर यदाकदा केही भने । मित्रहरूका कान नपरोस्, म त कांग्रेसका ठुल्ठूला नेताहरूले भाषण गर्दा बोलेको नै बुझ्दिनँ धेरै । अरू माध्यमबाट बुझ्ने र थाहा पाउने गरेको छु ।
संयुक्त आन्दोलनका आह्वानहरू सफल भइरहेका थिएनन् । उता चुनाव आयोगले को दल हुन् भनेर नछुट्ट्याउँदा पूर्वप्रमुख चुनाव आयुक्तहरूले भने उनीहरूको कामै त्यही हो र अनि हो प्रस्थानविन्दु । त्यो नभई चुनाव हुने पनि देखिएन । अनि दलहरूले बाहिर मुख निकालेर कराउने क्रम झन् तीव्र भयो । त्यो भनेको कठोर भाषिकाका उत्पादन र उच्चारण अनि प्रयोग जसले परिस्थितिले चिरिएका मन भएका नागरिकका मनमा झन् पीडा थप्ने मात्रै काम भयो । यस्तो अवस्थामा यी बहिर्मुखी दलका खेलाडीहरूलाई सडकबाट साना ठाउँमा फर्केर छलफल गर, विधिले दिएको काम गर भन्ने न्यायप्रणाली सक्रिय भयो । अदालतले संसद् पुनः स्थापनादेखि लिएर अरू जे निर्णय गर्‍यो, त्यसबाट सबैलाई राम्रो भयो । संसद्मा फर्क अनि राजनैतिक प्रक्रियाबाट समाधान गरभन्दा कसैले पनि हारेनन् । आत्मविवेचना गर्ने अवसर मिल्यो ।
यो निर्णयले हार्‍यौं भन्नेले भन्दा जित्यौं भन्नेले चर्का र किञ्चित अप्रिय भाषा धेरै प्रयोग गरेको सुनियो । शालीनताले काम लिनुपर्नेहरू झन् उत्तेजित भएर बोलेको सुनियो । मेरो आँखामा त त्यो बेला र अहिले पनि इजलासका पाँच जना न्यायमूर्ति र अरू भीमकायदेखि साना काँटीका वकिल र पूर्व न्यायमूर्तिहरू आइरहन्छन् । भर्खरै सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता बदर गरिदिएपछि भाषा उत्पादनमा नयाँ मोड आएको छ । अब सीमित भाषा प्रयोगमा कानुनी लवजहरू जोडिएका छन् ।
माथिका अनुच्छेदमा मनोवैज्ञानिक र ट्रउमा वा अभिघातको विषयको चर्चा भयो । भाषा प्रयोगले ट्रउमा हुने क्रम अहिले विश्वमा व्यापक हुँदै गएको छ । खासगरी राजनीति गर्ने र शासन गर्नेले यो विषयलाई नराम्रो गरी बिगारिदिएका छन् । झूट समाचार वा ‘फेक न्युज’ एक्काइसौं शताब्दीको चरित्र भएको छ । भाषाको यही दुष्प्रयोगका कारणले विश्वको प्रजातन्त्रको शक्ति मानिएको देश अमेरिकामा रिपब्लिकन दल खण्डित हुन सक्ने अवस्थामा पुगेको छ । भाषाको दुष्प्रयोग गर्ने विषय राजनीतिसँग जोडिएपछि त्यसले भयानक परिणाम निकाल्छ । दशकौं खाने अधिनायकवादको संस्कार र अभ्यास सिर्जना गर्छ । ट्रउमा भएका नागरिक सिर्जना गर्छ, तर ती देखिनसम्म पाउँदैनन् । भाषाबाट पीडा वा ट्रउमाको सिर्जना हुन्छ भन्ने कुरा नेपालका राजनैतिक दलहरूले बुझ्नु नै पर्छ ।
सिद्धान्तवादीहरू भन्छन्– ठाउँ पनि नियन्त्रण गर्ने अनि समय पनि नियन्त्रण गर्ने धारणाले भाषाको प्रयोग हुनु अधिनायकवादको लक्षण हो । अहिले यो ठाउँ र अवस्थामा पनि मेरै कुरा ठीक, हिजोको इतिहास पनि मेरै ठीक, भोलि जे गरिन्छ गरिन्छ भन्ने धारणाको अहिले बढी उन्माद देखियो राजनीतिमा । नेपाली दलहरूको उत्पत्ति र विकास ठीक किसिमले भएको छ । धेरै नकारात्मक भएर हेर्नु हुँदैन । तर यिनीहरू अहिले जुन किसिमको प्रवृत्ति र होडबाजीमा भाषा प्रयोग गर्दै छन्, त्यसले अशुभको संकेत गर्छ । अलग विचार राख्न भाषाको निर्मम प्रयोग गर्दा भन्ने र सुन्ने दुवैका सम्मानमा चोट लाग्छ । मलाई लाग्छ, पीडा र ट्रउमाले आक्रान्त नागरिकहरूले सुन्ने दलहरूको यस्तो अन्धाधुन्ध भाषा प्रयोग गलत हो । भन्ने वा लेख्नेलाई केही तुष्टि होला तर भाषाले आफैं भन्छ– त्यो आवेग हो जसले भाषा प्रयोगमा सिर्जनशीलता हराउँदै गएको देखाउँछ ।
अलिक अर्कै प्रसंगमा, भाषा प्रयोगको लेख्य पाटोमाथि मात्रै विचार गरिआएका हौं हामीहरू । प्रज्ञा प्रतिष्ठानले निकालेको एउटा शब्दकोशले हिज्जेमा अर्कै प्रयोग गरिदियो जुन पाठ्यपुस्तकमा पनि प्रयोग गरियो भनेर त्यसको खारेजी र पहिलेकै प्रयोग गर्ने विषयमा अनेकौं बहस समूह बनिए । त्यसमा एउटालाई भाषाशास्त्री शरच्चन्द्र्र वस्तीले नेतृत्व गरेका थिए । त्यसमा कमलमणि दीक्षित, तारानाथ शर्मा, बालकृष्ण पोखरेल, माधव पोखरेल, खगेन्द्र संग्रौला, गोविन्द भट्टराईजस्ता भाषाशास्त्री र लेखक थिए । यो हिज्जेमा मोटो ‘शहीद’ पातलो किन भएकोदेखि लिएर विभक्ति किन छुट्ट्याउने भन्ने विषय पनि थिए । तारानाथ दाइले त लेखै लेखेर भने– यो हिन्दीमा जस्तो विभक्ति छुट्ट्याउने कुरामा भारतले भित्रभित्रै पैसा दिएको छ । बहस हो, रमाइलो थियो । शरच्चन्द्र्र भाइले किताब पनि लेखे । धेरै थिति बसाए ।
भाषा प्रयोगमा केवल व्याकरणका बहसभन्दा अलग एउटा अर्को शक्तिशाली पाटो हुन्छ । त्यो हो, खास जीवनमा प्रयोग हुने भाषा, अझ भन्दा, ऊर्जावान् राजनीति जनिन प्रयोगको भाषा । भारत स्वतन्त्र भएपछि हिन्दीमा फटाफट मानक व्याकरण र प्रयोगका काम भइरहेका थिए भने उता स्वतन्त्रता संग्राममा ट्रउमा भएका मनहरूलाई महात्मा गान्धीका सरल, सोझा वाक्य गठन र अहिंसात्मक भाषिक प्रयोग र चेतनाको विस्तारले मुक्ति दिइरहेका थिए । कस्ता महान् नेता हुन् त ती ! नेपालमा युद्धले आक्रान्त मानिसका पीडा पनि राजनीतिसँगै जोडिएका हुनाले राजनीतिकै ‘फोकस’ गरेर समाधान निकाल्नुपर्छ । शान्ति र सत्यनिरुपणका कुरा छन् । तर विडम्बना, अहिलेको अवस्थामा उल्टै भाषिक प्रयोगका असंवेदनशीलताले घायल भएका छौं ।
प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७७ १०:०४
जब्बर फ्यानको बखान
लिखुरी हावा लिखुरी... !
तालको पानी बगेर जानी
अफगानी लेखकहरू सम्झेर